Indlu entle Yekhitshi yoNyaka-uKen Fulk Uyilo lweKhitshi - Ikhitshi Yonyaka
Indlu entle Yekhitshi yoNyaka-uKen Fulk Uyilo lweKhitshi
Qho ngonyaka, sibiza umyili ukuba adibanise iindlela ezintsha zokupheka kunye neendlela zokuyila kwindawo enye yokupheka. Ngeli xesha, umenzi wesonka saseSan Francisco uKen Fulk ufake ikhitshi elitshintsha umdlalo - kwaye Uhlaziye wonke umgangatho wokuqala-wosapho olunye oluthanda iqela eNew Orleans.
Jonga igalari 13Iifoto UDouglas Friedman 1Kaninzi '13Itekhnoloji yaMva nje
Inkqubo ye- IkhitshiAid I-oveni yodonga oluphindwe kabini, ifriji yomnyango waseFrance, kunye nesicoci sokucoca izitya (ngasekunene) kwisiphelo sentsimbi esimnyama esingenasiphelo sonke sinikezela 'ngetekhnoloji yakutshanje,' utshilo umyili uKen Fulk. Ukongeza, isitya sokupheka segesi esine-5 sikwenziwa ngu IkhitshiAid .
Isinki yokulungiselela kwangaphambili kwisiqithi ifakelwe itephu ye-Concetto nguGrohe. Ukuthatha ithuba kuyo yonke i-intshi yesikwere, iThomasville Cabinetry ibonelela ngeendlela zokugcina ezinjengekhabethe yokukhaba. Iikhabhathi zeperimeter kwisiphelo seSterling zinezihloko UCesarestone KwiClamshell.
UDouglas Friedman MbiniKaninzi '13Vula iishelufa
Umbhobho kaGrohe we-K7 ubonakalisa ukutshiza kwesimbo sokwenza umzi-mveliso, esenza umsebenzi okhawulezayo wokuhlanjwa kwezitya kwindawo yokucoceka yaseLatin yaseMelika. 'Iikhabhathi eziseludongeni nodonga oluphezulu zinokuziva zicinezela,' utshilo uFulk, ke ngoko wahluka inkangeleko ngeeshelfu ezivulekileyo ezinokuhamba ngokulula okanye ezantsi. Ubhedu lutsala kunye namaqhina ngakwa-Emtek.
UDouglas Friedman 3Kaninzi '13Ukongezwa kwezilwanyana ezinobuncwane
Inja yosapho ine-niche yayo, kunye nokutya kunye namanzi izitya ezifakwe kwikhabhathi ukunciphisa ukucinywa.
UDouglas Friedman 4Kaninzi '13Ugcino oluSebenzayo
Olunye ukhetho lokugcina ngobuchule oluvela kwiThomasville Cabinetry lubandakanya idrowa enzulu yeembiza kunye neepani eziza neshelufu yangaphakathi yokutsala ukubamba iibhidi. Ukufakwa kweDraw ebekwe engile kunokubamba izixhobo ezingaphezulu.
UDouglas Friedman 5Kaninzi '13IiAccents ezithuthuzelayo
'Ndiyayithanda imbono yento endala, kwaye le tafile yentsimbi yakudala ibonakala ngathi ibinokutsalwa ungene egadini, utshilo uFulk. Wayirhangqa ngezitulo zenkulungwane ye-19 zaseSweden kunye nomthendeleko 'okhuthaza abantu ukuba bazive bekhululekile.' Iidragons ezilwayo nguGaither Pope ovela kwigalari yaseCole Pratt eNew Orleans ibonakala eludongeni. Iipillow zomlomo zikaLoloi, ngelixa i-wedgwood china inxibe iipateni zePashmina kunye nePalladian. I-Toledo sconces yiTroy Lighting kwaye 'izisa ukukhanya kuphume kwisilingi, enobubele ebusweni bakho.'
UDouglas Friedman 6Kaninzi '13Iinjongo ezininzi zeKhabhinethi
Iibhanki ezisemgangathweni ukuya ekhayeni kwiikhabhathi ezingasemnyango zisebenza njengegumbi lodaka, kunye neekhabbhi zeebhegi zencwadi kunye neebhola ekhatywayo. Isakhelo sebhentshi esakhelweyo sigutyungelwe ePortico ukusuka kwingqokelela yeThobaut's Portico yeempahla zeSunbrella. Ileli yi-CSH.
gwinnett indawo mall izinto zasemzini
UDouglas Friedman 7Kaninzi '13Ukuxuba izinto
Kwigumbi lempuphu, isipili seFederal esivela kwingqokelela entsha yeKen Fulk yePottery Barn ixhonywe ngaphezulu kwesinki yelizwe laseMelika kunye nefama yelifa. Uyathanda ukuxuba izinto, uyachaza. Iindonga zipeyintwe kwindlu kaManor House kaSherwin-Williams.
UDouglas Friedman 8Kaninzi '13Indawo yokonwaba
Ibha yendawo yokuhlala yenziwe ngezinto zeKhabhinethi yaseThomasville ngendlela efanayo yeCabbott njengasekhitshini, kodwa ngeli xesha kugqityiwe uMnyama. I-countertop kunye ne-backsplash ikhona UCesarestone UVanilla Noir, ehamba nesinki emiselweyo yaseMelika. Zombini izinto ezenza umkhenkce kunye newayini ifriji yile IkhitshiAid .
UDouglas Friedman 9Kaninzi '13Umxholo ohambahambayo
Ejamelene nolusu oluxubileyo, ibha yaseChesterfield evela ePottery Barn yongeza enye indawo yokusebenzela kule ndlu isezantsi yendawo yokonwaba 'kunye ne-swagger encinci egumbini, utshilo uFulk. Uyile ii-Admiral barstools zePottery Barn, naye.
Iindwendwe ngokungaguquguqukiyo zifikelela ngaphandle ekuchukumiseni iitafile zecala lesinyithi zeCrococile, ziphoswe ngemvakalo yolusu lwengwenya. Ucacisile. Kwaye bongeza kolo hambo lwehlabathi. '
Umxholo wokuhamba ukwakhuthaze umzobo owenziwe ngesandla. UFulk ngumlandeli omkhulu wamaphephadonga amnandi kwaye wagqiba kwelokuba enze eyakhe inguqulelo, eyenzelwe yena ngesi sithuba. Iindonga zazigqunywe ngelinen yeCurtis nguThobaut, emva koko umzobi uRafael Arana wazobe imifanekiso eyahlukeneyo ekhupha indawo endala yaseNew Orleans. Isilumko se-Uni nguTroy Lighting kukuphela kokuchukumisa.
UDouglas Friedman 10Kaninzi '13Indawo yokuPhumla
Iphalethi engwevu, emnyama, kunye nekhrim iziva ipholile kwasebusuku bushushu eNew Orleans. Isofa yaseCarlisle kunye nesihlalo se-Thatcher wingback zivela kwiPottery Barn. Iitafile ezisecaleni kweNgwenya, isibuko seTramp, isibane seRetriever, kunye netafile yeMithwalo, zonke zivela kwiKen Fulk Collection yePottery Barn. Umbhoxo ka-Anastasia nguLoloi.
UDouglas Friedman Shumi elinanyeKaninzi '13Ukufudumala ngaphezu koBume
Ipeyinti epeyintiweyo kwigumbi losapho yaziva isesikweni xa udonga olwahluleyo ekhitshini luye lwasuswa, ke uFulk wayelususile ukuveza ubushushu bemithi endala. Isofa yecala lesikhumba, i-Crocodile castmetal coffee table, i-Keyhole dressers, kunye neCarlisle armchair yonke isichotho esivela kwingqokelela yeFulk's Pottery Barn. Isitulo esihlala isitulo sigutyungelwe ngokungalindelekanga kwilinen eshicilelweyo ye-zebra, kuba 'andinakuyichasa indlela elungileyo yezilwanyana.' Indawo yokuhlala yendlu nguTroy Lighting, kunye neTurin Too rug nguLoloi.
UDouglas Friedman 12Kaninzi '13Uhlobo lwangaphandle-ngaphakathi
Kwivaranda lekhaya, ifanitshala yangaphandle ngeLane Venture inokuma kwizinto kwaye ibandakanya isofa yeClare yecandelo, isitulo esingenamikhono sikaClare, kunye netafile yecocktail yeRenaissance Square. Isitulo sesikhumba sePommel nguKen Fulk sePottery Barn. Umbhoxo onemigca ye-chevron uvela kwingqokelela yangaphakathi yePalm Springs nguLoloi, kwaye isibane saseCampanile siseTroy Lighting.
UDouglas Friedman 13Kaninzi '13Ekhanyayo kunye neBold
Kwesinye isiqingatha sevaranda ende, amakhethini amakhulu, amahle anemigca e-Oasis Awning evela kwingqokelela yeThobaut's Portico yeempahla zaseSunbrella zinika indawo yokubhenela. 'Benza uzive ngathi usekhefini ekhayeni lakho, utshilo uFulk. Umbala yiyantlukwano epinki ye-shrimp egxininisa ikhitshi. Umxube weepateni, kubandakanya imilenze yesiko ejingayo, iyaqaqamba kwaye inesibindi: 'Unako ukunyusa ivolumu xa ungaphandle.'
I-Lane Venture yePark Shore yokutya itafile yinto ephucukileyo etafileni yepikniki. Ijikelezwe yibhentshi yePark Shore kunye nezitulo ezisecaleni zikaBennett eziqhotyoshelwe emgceni oqhelekileyo, zonke ziLane Venture. Usihlalo wegadi yeediliya yiFrentshi, kunye nenqwelomoya yeAdmiral nguKen Fulk wePottery Barn. Isibane sodonga lweSagamore nguTroy Lighting.
Oku kwaqala ukuvela ku-Okthobha ka-2015 Indlu entle.
OkulandelayoINew Orleans engenzi nzuzo ifumana uKwenziwa kweKhitshi eSitayile Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukuba babonelele ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
iishelfu zasekhitshini endaweni yeekhabhathi
Izimvo zokuhombisa zeblue eziluhlaza
Indawo yokuhlala i-300 yezikwere
isilingi fan kwigumbi lokuhlala
Izimvo zangaphandle zomthi wekrisimesi